CBD Maka Enyemaka Mgbu | CBD kacha mma na 2021
Mmetụta dị n'akụkụ nke CBD maka enyemaka mgbu
Cbd, nke dị mkpụmkpụ maka cannabidiol, na -aga n'ihu na nkwanye ugwu dị ka mgbakwunye "ya", nke nwere ike ịgwọ ọnọdụ ahụike dị iche iche, nke gụnyere, nchekasị, mgbu na ehighị ụra nke ọma, naanị iji depụta ole na ole. Ọ dị n'ụdị dị iche iche, site na Ude nke CBD na mmanụ na nri na ihe ọ -ụ -ụ ndị CBD nyere. Ma ọ na -arụ ọrụ n'ezie?
Cbd bụ otu n'ime ogige dị na osisi Cannabis Sativa. Marijuana sitere na Cannabis Sativa, mana CBD enweghị akụrụngwa psychoactive nke tetrahydrocannabinol (THC), nke bụ ihe na -arụ ọrụ na wii wii. Ogwe abụọ ahụ nwere mmetụta na sistemụ endocannabinoid nke anyị nwere n'ahụ anyị. Usoro a na -ahụ maka nhazi mgbu, agụụ, na ebe nchekwa, n'etiti ndị ọzọ.
Agbanyeghị na enweghị ezigbo ahụike ahụike na -egosi mmetụta CBD nwere n'ahụ, ọkachasị n'ihi mpaghara ntụpọ iwu nke CBD nọrọ ogologo oge, enwere ihe akaebe na ị nwere ike iji CBD maka enyemaka mgbu.
Ọ bụ ezie na enweghị ozi ọhaneze gbasara nnwale ụlọ ọgwụ na iji CBD maka enyemaka mgbu, ọtụtụ ọmụmụ egosila na CBD nwere ike belata mgbu na ọzịza, na uru ọ nwere mmetụta ole na ole. Na mgbakwunye, ndị mmadụ akọpụtala na CBD na -ebelata nchekasị na ehighị ụra nke ọma, ọnọdụ ndị a na -ejikọkarị na mgbu na -adịghị ala ala. Site na nkwado iwu nke CBD sitere na hemp n'ọtụtụ steeti (nke na-enweghị THC), ọtụtụ mmadụ atụgharịala CBD dịka ụzọ ọzọ maka enyemaka mgbu.
A na -atụ aro na ndị mmadụ na -arịa ọnọdụ mgbu na -adịghị ala ala ga -agwa ndị dọkịta ha okwu maka ị were CBD dị ka ụzọ ọzọ. Agbanyeghị, enwere ndụmọdụ maka ndị chọrọ ịnwale CBD maka mgbu:
Sịga abụghị usoro kachasị mma: Sịga nwere ike imerụ ngụgụ, ewezuga, ọ bụghị ụzọ kachasị ọsọ iji nweta ahụ efe.
Usoro nchịkwa dị mkpa: CBD ka mma ka ewere ya na tincture iji nweta nsonaazụ ngwa ngwa, ma ọ bụ na mbadamba ma ọ bụ capsules jel dị nro, maka iji nwayọ, mwepụta gbatịkwuru.
Ịzụta n'aka ndị nkesa a ma ama. Dị ka vitamin na mgbakwunye ndị ọzọ, FDA anaghị achịkwa CBD, yabụ ọ ka mma ịnweta ya n'aka ụlọ ọrụ ama ama, dị ka Red Emperor CBD, nke nwere ngwaahịa ndị ọzọ nwalere nke ọma.
Ọ ka mma ịmalite site na obere dose. Mgbe ahụ, jiri nwayọ mụbaa ya, ruo mgbe ị nwetara ahụ efe dị ukwuu site na mgbaàmà gị. Soro akara gị iji chọpụta ma CBD ọ na -enyere gị aka dị ka ihe mgbu.
Ụfọdụ nnyocha ụlọ ọgwụ egosila na ọ bụrụgodi na mmanụ CBD bụ ihe nchekwa dị n'okike nke sitere n'okike, mmanụ CBD nwekwara ike rụpụta ụfọdụ mmetụta. Ugboro ugboro na ịdị njọ nke mgbaàmà ndị ahụ nwere ike ịdị iche site n'otu onye gaa n'ọzọ. Mgbaàmà mmetụta ndị na -emekarị nwere ike ịgụnye:
Mgbanwe na agụụ
Mgbanwe na ọnọdụ
Mmetụta ọnụ ọnụ
Mmanụ CBD nwekwara ike ịbawanye enzymes imeju, nke bụ akara nke mbufụt imeju. Ndị nwere ọnọdụ imeju nwere ike iji CBD, mana ha kwesịrị iji nlezianya kpachapụ anya jiri mmanụ CBD, dị n'okpuru nlekọta dọkịta nwere ike ịme ule oge niile maka ọkwa enzyme imeju ọbara.
Ekwesịrị izere mmanụ CBD kpamkpam n'oge ime na inye nwa ara. Afọ 2018 ọmụmụ Ndị American Academy of Pediatrics duziri ụmụ nwanyị ka ha zere ịjuanaụ wii wii na ngwaahịa ndị ọzọ na-esi na cannabis n'oge afọ ime n'ihi ihe egwu nwere ike imetụta mmepe nwa. Agbanyeghị na ọ bụghị n'ụzọ zuru oke ka CBD si enye onyinye, a maara CBD na ọ nwere ike nyochaa site na mgbochi placental.
Ọ bụrụ na ị na -eche maka iji mmanụ CBD gwọọ ọnọdụ ahụike dịka mgbu, jide n'aka na gị na onye na -ahụ maka ahụike gị kwurịtara iji jide n'aka na ọ bụ nhọrọ ziri ezi maka gị.
PreviousPrevious post:Ndị ọrụ nyocha kwenyere na CBD nwere ike ịgwọ & gbochie Coronovirus.OsoteNext post:Etu esi eji mmanụ CBD maka mgbu?